DEG DEG:- War cusub oo goordhaw kusoo kordhay shirka madasha wadatashiga qaran ee Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- War cusub oo goordhaw kusoo kordhay shirka madasha wadatashiga qaran ee Muqdisho
Warar goordhaw naga soo gaaray xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxda shirka madasha wadatashiga qaran ay heshiis wadajir ah ay ka wada gaareen qodobadii la isku haayay inta uu shirkaasi socday.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo oo aynu ka heleyno goobta uu shirka ka soconaayo ayaa sheegaya in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ee ka qeyb-galaya shirka madasha ay galabta shaacin doonaan dhamaan qodobadii ay ku heshiiyeen intii uu shirkaasi soconaayay, islamarkaana ay war-murtiyeed kasoo saari doonaan.
Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadda dalka ayaa muddo 7 maalmood ah shir wadatashi ah uga soconaayay xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, waxaana inta uu shirkaasi socday la isku qabsaday dhowr qodob, inkastoo haatan la sheegayo inay ka heshiiyeen qodobadaasi oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay ahayd markii guddiga doorashada dalka uu soo saaray jadwalka doorasho ee dalka ka dhici doonta sanadkaan 2016-ka, waxaana saacadaha fooda inagu soo haysa la sugayaa war-murtiyeedka ay soo saareen madaxda shirka madasha wadatashiga qaran oo maanta si kama dambeys ah war-murtiyeedka usoo saari doono.
La soco wixii warkaan kusoo kordha Insha Allaah.